अन्यौलमा अनाधिकृत दाउफिन्स ! | Hamro Khelkud
अन्यौलमा अनाधिकृत दाउफिन्स !
पछिल्लो समय नेपालका प्रतिष्ठित मोफसल फुटबल प्रतियोगितामा विदेशी खेलाडी सम्मिलित क्लब दाउफिन्स टिम फ्यामिलीको नाममा प्रतिस्पर्धा गर्यो । आइतबार भएको पोखरा कपको फाइनलमा दाउफिन्सले विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लबलाई पराजित गर्दै उपाधि नै जित्यो । तर उक्त क्लब अनाधिकृत रुपमा नेपालका प्रतियोगिताहरु खेलिरहेको खुलासा भएको छ ।
खप्तड गोल्डकप खेल्नका लागि नेपाल भित्रिएको दाउफिन्स क्यामरुनको क्लब भनिएपनि हालसम्म आधिकारिक रुपमा क्लब बारे अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई कुनै जानकारी नभएको महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले जनाएका छन् ।
सर्वाधिक धनराशी पुरस्कार भएको खप्तड गोल्डकपको आयोजक सुदूरपश्चिम-११ फुटबल क्लबको विशेष आग्रहमा एन्फाले दाउफिन्सलाई उक्त प्रतियोगिता खेल्न स्वीकृति दिएको थियो । उक्त प्रतियोगितामा दाउफिन्सका आउने भनिएका सबै खेलाडी भने उपलब्ध थिएनन् ।
क्यामरुनबाट २० सदस्यीय टोली आउने भनेपनि ११ जना खेलाडी मात्र नेपाल आएको कारण तीन खेलाडी भारतबाट मगाइएको थियो । दाउफिन्सले संकटाविरुद्ध पहिलो खेल भारतबाट खेलाडी नआएको कारण नै निर्धारित समयभन्दा ढिलो सुरु भएको थियो । खेलाडीहरु भिसा समस्याले बोर्डरमा अड्केपछि उनीहरु ढिलो आइपुगेका थिए ।
मैदान प्रवेश गर्ने क्रममा विदेशी टोली भएपनि एक सेट जर्सीकै भरमा टोली टिकेको देखिन्थ्यो । सामान्य रुपमा कुनैपनि टोलीले वार्मअप र खेलका दौरान फरक जर्सी प्रयोग गर्ने प्रचलन छ । तर दाउफिन्सले खेल र वार्मअपमा नै त्यहि जर्सी प्रयोग गर्यो । खेलमा संकटा १-० ले विजयी भएपछि दाउफिन्सको यात्रा समाप्त भयो ।
दाउफिन्स क्यामरुनको क्लब भनेपनि प्रशिक्षकमा नेपाली आशिक थापामगर रहेका थिए । आशिक ए डिभिजनमा हिमालयन शेर्पा क्लबसंग आबद्ध रहेका खेलाडी हुन् । उनले पहिलो खेलमा संकटासँग पराजित भएपछि खेलाडी लामो यात्राको थकानका कारण पराजित हुनुपरेको पनि बताएका थिए । टोलीको व्यवस्थापकमा सुगन तन्डुकार रहेका छन् । उनले नै आयोजकसँग समन्वय गरेर टोलीलाई नेपाल ल्याएका थिए ।
खप्तड गोल्डकपमा प्रशिक्षक आशिक थापामगर (बीच)
एन्फाले खप्तड गोल्डकप खेल्न स्वीकृति दिएको दाउफिन्स प्रतियोगिताबाट बाहिरीपछि स्वदेश फर्कनुपर्ने थियो । सामान्यतया कुनैपनि विदेशी क्लब प्रतियोगिताको एक दिन अगाडि र एक दिन पछाडिसम्म आयोजकले राख्ने व्यवस्था छ । कतिपय अवस्थामा खेलाडीहरुको आते-जाते खर्च पनि आयोजकले नै बेहोर्ने प्रावधान रहेको छ । दाउफिन्स प्रतियोगिताबाट बाहिरिएपछि पनि स्वदेश फर्केन ।
सुदूरपश्चिममा आयोजित खप्तड गोल्डकपबाट बाहिरीपछि इटहरी गोल्डकप खेल्न दाउफिन्स पूर्व पुग्यो । एन्फाले खप्तड गोल्डकप खेल्न स्वीकृति दिएको दाउफिन्सले नेपालमै रहेर दोस्रो प्रतियोगिता खेलेपनि सफलता भने हात पारेन । पहिलो खेलमा मेची नेत्रालय काक्करभीट्टा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टरसंग टाइब्रेकरमा पराजित हुँदै दाउफिन्सको यात्रा सकियो ।
त्यसपछि दाउफिन्सले पोखरा कपमा सहभागिता जनाउने भयो । कास्की जिल्ला फुटबल संघले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा दाउफिन्सले उपाधि नै जित्यो । यसक्रममा टोलीमा तीन खेलाडी थपिए पनि । पहिलो खेलमा च्यासललाई १-० ले पराजित गरेको दाउफिन्सले दोस्रो खेलमा आर्मीलाई ४-१ को अन्तरले पन्छायो । सामान्यतया विदेशी टोलीले दोस्रो चरणमा मात्र खेल्ने भएपनि अन्य प्रतियोगिता नभएका कारण दाउफिन्सले पहिलो चरणमा नै खेलेको थियो ।
सेमिफाइनलमा लिग च्याम्पियन मनाङलाई हराएको दाउफिन्सले फाइनलमा एपीएफलाई पराजित गर्दै उपाधि हात पार्यो । सेमिफाइनलमा मनाङविरुद्ध जर्सी जुधेपछि रेफ्रीले दाउफिन्सलाई अर्को जर्सी लगाउन आग्रह गर्दा टोलीले एक सेट जर्सीमात्र ल्याएको खुलेको थियो । हालसम्म सबै खेलमा त्यहि जर्सीमा टोलीले खेलिरहेको छ ।
आयोजक पोखरा-११ को जर्सी सापटी लिएर टोलीले मनाङविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । फाइनल खेलको पुरस्कार वितरण समारोहमा एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा पनि उपस्थित थिए । उनले नै विजेता टोलीलाई ट्रफी प्रदान गरेका थिए ।
त्यसयता भने एन्फाले दाउफिन्सलाई टोलीलाई फर्काउन चिठी काटिसकेको एन्फा महासचिव तुलाधरले बताएका छन् । टोलीको आधिकारिकताबारे खोज्दा केहि नभेटिएपछि अन्य प्रतियोगिता नखेल्न चिठी पठाईसकेको तुलाधरले बताए । ‘ हामीले क्यामरुनमा टोलीको आधिकारिकता बारे सोध्दा यस क्लबबारे केहि आधार पाएनौं । हामीले मौखिक रुपमा टोलीलाई घर फर्किन भनिसकेका थियौं । एन्फाले अधिकारिक रुपमा चिठी पनि काटिसकेको छ,’ उनले भने ।
बुढासुब्बा गोल्डकपमा दाउफिन्सले बुधबार नेपाल एपीएफ क्लबसँग खेल्ने तय भएको छ । तर महासचिव तुलाधरले त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । एक प्रतियोगिता खेल्ने स्वीकृति लिएको दाउफिन्स बुधबार चौथो प्रतियोगितामा सहभागी हुने तयारीमा छ । एन्फाले स्वदेश फर्कन चिठी काटिसकेको अवस्थामा दाउफिन्सले बुढासुब्बा खेल्ने-नखेल्ने भने अन्यौलमा परेको छ ।
विदेशी टोली भनेर नेपाल भित्रिएको क्लबमा प्रशिक्षक र व्यवस्थापक नेपाली नै छन् । क्यामरुनमा कुनै अस्तित्व नभेटिएको यस क्लब विदेशी खेलाडी जम्मा गरेर स्थापित गरिएको क्लब हुनसक्ने आशंका पनि रहेको छ । यसअघि पनि नेपालमा कुनै क्लबमा आबद्ध नरहेका विदेशी खेलाडी जम्मा गरेर अफ्रिकन युनाइटेडको नाममा मोफसल प्रतियोगिता खेलेको थियो ।
एन्फाले मोफसलका सबै आयोजकलाई उक्त क्लब अनाधिकृत रहेको बताएपछि सहभागिता रोकिएको थियो । यसपटक दाउफिन्सलाई पनि एन्फाले घर फर्कने चिठी लेखेसँगै बुढासुब्बामा सहभागितासँगै क्लबको स्थितिमा अन्यौलता रहेको छ ।